I-Lime Kiln, i-Lime Kiln Isixhobo, i-Vertical Lime Kiln - uYuda
I-kiln yegumbi eliphindwe kabini
I-Juda kiln -200T / D imigca ye-3 yokuvelisa -iprojekthi ye-EPC
Isicatshulwa sohlahlo lwabiwo-mali (i-kiln enye) Igama Ingcombolo Ubungakanani beyunithi Ixabiso / $ Iyonke / $ Isiseko se-rebar 13 T 680 8840 ikhonkrithi 450 cubic 70 31500 Iyonke 40340 isakhiwo sentsimbi Ipleyiti yentsimbi 140 T 685 95900 umbandela osondeleyo 332 T2018 332 T268 iyonke 332 T208 332 T269 I-Kiln body insulation firebrick (LZ-55,345mm) 500 T 380 190000 fireclay 50 T 120 6000 Aluminiyam silicate f...
Juda Kiln-Inner Mongolia 300T/D×3 kokusingqongileyo...
Iiparamitha zobugcisa kunye netheyibhile yokusebenza Nombolo Iziqulatho Iiparamitha 01 (24h) Umthamo 100-150t, 200-250t, 300-350t 02 Indawo ehlala kuyo 3000–6000sq.m 03 Ubude bubonke 40-55M 30-55Mfective Height 06M2 Effective 04 M2 Eft. 9M 06 Idayamitha yangaphakathi 3.5-6.5M 07 Ubushushu bokudubula 1100℃-1150℃ 08 Ixesha lokudubula Ukujikeleza 09 I-Fuel Anthracite, 2-4cm, ixabiso le-calorific elikhulu kune-6800 kcal/kg 10 ukusetyenziswa kwamalahle 1...
I-Juda kiln -300T / D umgca wokuvelisa -iprojekthi ye-EPC
Inkqubo yetekhnoloji: Inkqubo yeBatcher: ilitye kunye namalahle zithuthwa ngokulandelelanayo ukuya kwi-emele yelitye kunye ne-cache yamalahle ngamabhanti; . Inkqubo yokutya: ilitye kunye namalahle agcinwe kwibhanti edibeneyo ihanjiswa kwi-hopper, eqhutywe yi-winder ukwenza i-hopper ijikeleze phezulu nangaphantsi ukuze idle, ephucula umthamo wokuthutha kunye nokuphumelela ...
I-Juda kiln - i-100 yeetoni / inkqubo yemveliso yosuku ...
I. Ukubaluleka kokuphuhliswa kweNew Modern Lime Kiln Technology Ikalika iyona nto iphambili kunye neyona nto incedisayo kwimveliso yensimbi, ukuveliswa kwe-calcium carbide, ukuveliswa kwe-refractory, ukuveliswa kwe-alumina. Ngokukodwa kwixesha elitsha, iteknoloji entsha, iimveliso ezintsha ziqhubeka nokuphuhlisa izinto ze-calcium zisetyenziswa ngokubanzi. Ukuziqhelanisa kubonakalise ukuba itekhnoloji yale mihla ye-lime kiln ngokwenene iyinzuzo yokwenyani kwaye yindlela emfutshane yenzuzo eqaqambileyo kumashishini entsimbi kunye nentsimbi, amashishini e-calcium carbide...
I-Juda Kiln-Cross icandelo elisezantsi kwiziko
Ukusebenza okuphezulu kwezixhobo (1) Imveliso ephezulu yemihla ngemihla (ukuya kwiitoni ezingama-300 ngosuku); (2) Umsebenzi ophezulu wemveliso (ukuya kwi-260 ~ 320 ml); (3) Izinga lokutshisa eliphantsi (≤10 ipesenti;) (4) Umxholo ozinzileyo we-calcium oxide (iCaO≥90 ipesenti); 5 (6) Ukunciphisa ubungakanani bekalika esetyenzisiweyo yimveliso emva kokusetyenziswa lishishini (30 pesenti yokwenza intsimbi, i-desulphurization kunye ne-s...
Igrill yesithando soMzimba weKiln
8. inkqubo yentaba yesithando somlilo I-lime egqityiweyo idlula kwisakhelo somlilo phantsi kwesenzo sobunzima, amasuntswana amancinci awela ngokuthe ngqo kwi-hopper yothuli, amasuntswana amakhulu ahlala ngaphandle kwentaba yesithando somlilo, akhusele umbhobho wokutsha, aqinisekise ukunikezelwa kweoksijini, angakwazi ngokuzenzekelayo. lawula isantya sokukhutshwa kwemveliso egqityiweyo kwisithando somlilo, kwaye inceda kakhulu kwindawo egudileyo, isivuno esiphezulu kunye nokutsha kwepetroli. Ukuba ubungakanani be-limestone abulingani, umahluko mkhulu kakhulu ...
Iinqanaba ezimbini zokutshixa iValve yoMoya
10. Inkqubo yokutshixa umoya Isixhobo sevalvu yokutshixa umoya enamanqanaba amabini: yenye yeenkqubo eziyimfuneko ekuvelisweni kwehoko ye-lime shaft. Isixhobo sokususa umlotha jikelele kukumisa umoya kunye nokukhupha umlotha, esi sixhobo kukugcina umoya kwaye utywine umlotha: kwinkqubo yokususa umlotha, ngenxa yokutywinwa kokujikeleza kwee-baffles ezimbini, umoya ovuthayo awuyi kuphuma. inxalenye engezantsi, enokuphucula ngokufanelekileyo umgangatho kunye nemveliso yekalika. Ubume besixhobo: isixhobo siyi-compost...
11. Inkqubo yobonelelo lomoya Kule mihla, uninzi lweziko lokutshisa ikalika zibonelela kuphela umoya ezantsi, ongasasazwanga ngokulinganayo, kwaye uqhelene neziganeko zokutshisa okungaphelelanga, ukutsalwa okungundoqo, ukukhokwa kunye nokucokisa ikona. Umoya woxinzelelo oluphezulu oveliswe ngumlandeli wethu okhethekileyo wokutsha ukhuphuka ukuya kwindawo ye-calcining ngokusebenzisa indawo yokupholisa ezantsi kwe-oven. Indawo yokupholisa ngokwenene yindawo yokutshintshiselana kobushushu. Ubushushu bekalika buyehla kakhulu xa ubushushu bendalo bunyuka nge-lim yobushushu obuphezulu...
I-Linyi Juda isayensi kunye nobunjineli bokukhusela ubunjineli bokusingqongileyo., Ltd. umzi-mveliso onembali engaphezu kwama-30 eminyaka, ingakumbi ibandakanyeka kukhuseleko lokusingqongileyo kwikonti yekalika ethe nkqo, izixhobo ezixhasa iziko lomlilo, izixhobo zokususa uthuli zokusingqongileyo kunye nenkqubo yolawulo oluzenzekelayo, njl. iphumelele intembeko yoninzi lwabathengi ngenkqubo yoyilo egqibeleleyo, iimveliso eziphambili ezigqwesileyo, ulwakhiwo olomeleleyo kunye nomthamo wokuvelisa, umgangatho wobunjineli othembekileyo, umgangatho ophezulu wenkonzo kunye nokusebenza kakuhle.
Itekhnoloji yokususa uthuli ye-lime kiln
Kukho iintlobo ezininzi zee-lime kilns. Ukuphuhliswa kwezitofu zekalika nako kuye kwanceda ukuveliswa nokusetyenzwa koshishino lwethu, kodwa ingaba sazi kangakanani malunga nolwazi lokususa uthuli lwekalika K iikhilni? Namhlanje siza kwazisa ngokufutshane ezinye zazo. Zininzi iintlobo zeendlela zokususa uthuli...
Umgaqo wokususwa kothuli kunye neempembelelo zezinto zomqokeleli wothuli lwengxowa
Ingxowa yohlobo lokususa uthuli sisixhobo esimisa iingxowa ezininzi zokucoca kwigumbi lothuli ukuze kuhlanjululwe irhasi enothuli. Amalungu ayo aphambili ziingxowa zokucoca, iqokobhe, ihopper yothuthu kunye nendlela yokubhabha. Indlela yokususa uthuli lomqokeleli wothuli lwengxowa inzima, kubandakanywa ukungqubana kwe-inertial, ukungenelela,...
Ukubaluleka kokucoca i-lime kiln
Okwangoku, uluntu lukhuthaza ukukhuselwa kokusingqongileyo, ngoko ke uphuhliso lweziko likalika kufuneka lucoceke. Okwangoku, esona sixhobo sixhaphakileyo sokwenza i-limestone calcining yi-oven emile. Iimpawu zayo zesakhiwo ikakhulu zixhomekeke kwindlela yokutshisa amafutha kunye nomthamo wemveliso ...
Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kwiikhilthi zekalika ezahlukeneyo
Kule mihla, ngokuphunyezwa ngokuthe ngcembe kolwakhiwo loqoqosho lwesizwe, imfuno yekalika iye yanda. Nangona kunjalo, i-kiln yendabuko yomhlaba iye yavalwa ngurhulumente ngenxa yokusetyenziswa kwamandla aphezulu, ukusebenza kakuhle kwe-thermal, izinga eliphezulu lokutshisa kunye nongcoliseko olukhulu. Ngoku...
Ulwazi lweziko likalika
Iziko lokutshisa ikalika sisixhobo esibalulekileyo kwimveliso yethu yekalika, kwaye iintlobo ezinxulumene neziko lokutshisa ikalika ziyanda, ngoko ke unolwazi olungakanani malunga nolwazi olufanelekileyo lweziko likalika? Emva koko siza kukwazisa ngokufutshane ezinye kuwe. Isibaso sekalika evuthayo sibanzi kakhulu, isibaso esiqinileyo, isibaso serhasi...
I-Industrial Park, uMmandla woPhuhliso loQoqosho waseLinyi, kwiphondo laseShandong, eChina
Umphathi weNtengiso: Ella+8615866201119 uMphathi woBugcisa: Allen +8613953913090
Ukwenza iCalcium Hydroxide, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, ICalcium Hydrooxide Processing, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, ICalcium oxide Production Line, Ukwenza iCalcium Hydroxide,